> Resource > Video > dar-guur Gaarka ah iyo Raadka in Videos
Kala guurka Video yihiin dhaqdhaqaaqa muuqaal ah oo u dhexeeya laba clips video, iyo isku biirida clips waa guurka ka mid sawir ama video ka mid ah ee soo socda. saamaynta guur noqon kartaa goobta degdeg ah ama isbedel image, ka baxeysa ah, milmi, 3D isku shaandheyn ama wax saamayn digital.
Marka aad rabto in aad si loo kobciyo videos aad shakhsi, guurka door aad u muhiim ah siinaya saamayn qasayso marka isbedel goobta. Tayada sare saamaynta guurka dhexeeya video clips waxaad siin kartaa dareenka aad u la yaab leh, aad u aragto in badan video cajiib ah guurayso jeer kun, dhibaatooyinka soo muuqan mid adag inkastoo fanaaniinta fiirin.
Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe ha laga yaabaa inaad u samaysaa bandhigyo video slideshow yaab leh saamaynta guurka qabow ku daqiiqo. Sida daraasiin free video kala guurka iyo saamaynta waxa lagu bixiyaa software-ka, waa mid aad u fudud in ay la shaqeeyaan iyo xirfadaha lahayn ayaa loo baahan yahay. Labada version Windows iyo version Mac of DVD Muqaal dhise siiyaan Hababka diyaar-dhigay, oo waxaa lagu dhisay iyadoo la kala guurka gaar ah oo isla goobtii ku dari kartaa damacyadii in ay sawiro iyo videos aad, si aad xitaa uma baahnid in aad qotomisay kala guurka naftaada.
Tallaabooyinka Easy in lagu daro kala guurka gaar ah iyo saamaynta in videos
Tallaabo 1: Ku dar sawiro ama video clips
Free download slideshow software video, rakibi iyo waxa maamula. First dooran Advanced Mode, si fudud guji "Add Files" button inay soo qaadaan suuqa kala caleenta ah, ka dibna ay doortaan sawirada / video files sida aad jeceshahay.
Talaabada 2: Calan video gaarka ah guurka saamayn
Ka dib markii ay soo degida photos, u tag "Abaabulaan Tab", oo waxaad ka heli doontaa saamaynta guurka la geliyo inta u dhaxaysa laba photos kasta / videos si toos ah iyo kala sooc lahayn. Markaas waxaad dooran kartaa 5 qaybood ee saameynta kala guurka ( 3D , Alpha , libdhi , Slide oo siman ) sida aad jeceshahay. Guji mid ka mid ah guurka saamayn inuu u ciyaaro iyo Falanqeynta, iyo dooran saamayn aad doonayso inaad by double-magcaabo ama jiita iyo hoos u dhexeeya laba clips video. By default, ee mudada video guurka waa 2.0 labaad, laakiin waxa aad dhisan kartaa saamaynta ay u double-riixaya in Storyboard ah.
Halkan waxaan dooran guurka libdhi halkaas oo goobta ugu horeysay u muuqda in uu si tartiib tartiib ah lagu yaraaday halka engegay ee goobta soo socda.
Fiiro gaar ah: In "Abaabulaan Tab", waxaad geli kartaa clip fanka iyo saamaynta goobta galay video clip ayaa sidoo kale waxa ay qurxiyaan.
Talaabada 3: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo Samee
Guudmar aad video slideshow ee "Samee Tab", oo ku noqo in la beddelo-guurka iyo saamaynta haddii aadan jeclaan. Marka aad ku qanacsan tahay video ah, waxa la joogaa wakhtigii si aad u gubi video slideshow gal disc ama abuuro video qaabab kala duwan. Waxa kale oo aad gali kartaa video la saamaynta guurka qabow si dhakhso leh YouTube oo tus dad badan.
Sida aad ka arki, waa arin aad u fudud! Ku bilow inaad ku darto saamaynta guurka qabow aad videos la Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe hadda!
Sida loo Beddelaan Video_TS in DVD